Charles Andriamiseza : « Ara-dalàna ny Fitsarana an’i Lylison » - Triatra 21 février 2017 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil NEXTHOPE Charles Andriamiseza : « Ara-dalàna ny Fitsarana an’i Lylison » – Triatra...
Charles Andriamiseza : « Ara-dalàna ny Fitsarana an’i Lylison » – Triatra 21 février 2017
Nanaraka ny fepetra notakian’ny lalàna ny fitsarana an’i Lylyson, ilay senatera namoahan’ny fitsarana didy fampisamborana iny. Tsy marina mihitsy ny filazana fa fitsarana maka loko politika iny, hoy ny minisitry ny Fitsarana Charles Andriamiseza.
“ Niteraka resabe teny anivon’ny haino aman-jery sasany ny mikasika ny fitsarana ny senatera Lylyson. Tahaka ny raharaham-pitsarana rehetra anefa iny. Tonga teto ny dosie rehefa vita ny famotorana avy amin’ny polisy mpanao famotorana. Koa satria moa tsy nipoitra ilay olona dia namoahana didy fampisamborana. Dosie nisokatra toa ny dosie rehetra iny ka tsy maintsy nofaranana : tsy maintsy notsaraina. Rehefa nandeha ny fitsarana dia iny nivoaka iny ny didim-pitsarana. Ny lalàna kosa dia mametraka fa rehefa tsy manatrika an’ilay fitsarana ny voampanga dia tsy afaka miteny ny mpisolovava azy. Afaka manatrika fa tsy afaka miteny. Nanatrika teo izao ny mpisolovava an’i Lylyson saingy tsy afaka niteny araka ny voalazan’ny lalàna”, araka ny fanazavan’ny minisitry ny Fitsarana.
Namaly avy hatrany ny fanambaran’ny Mapar, vovonana politika misy an’ity Senatera ity io fanazavan’ny minisitry ny Fitsarana io. Ara-dalàna sy nanaraka ny pitsopitsony araka izany ny fitsarana an’i Lylyson fa tsy araka ny tsaho naely. Voavaly avy hatrany koa ny ahiahian’ny fianakavian’ity senatera ity. Raharaham-pitsarana tahaka ny raharaha rehetra no nitranga ka tsy tokony omena loko ho “raharaha politika”. Omaly tokoa mantsy dia nametraka fanoherana momba an’iny didy iny ny avy amin’ny fianakavian’ity senatera ity.
RAJAONA Andriamihaja remplace M. ANDRIANAHO Njaka Lalaina en tant que Directeur des Affaires Financières et de la Programmation Budgétaire de l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes.
Article précédentNomination de HARIMISA : silence étrange du SMM – La gazette de la grande île du 23 juin 2018
Madagascar – Ecole nationale de la magistrature – La Cnidh exige...